AMANGQINA KAYEHOVA ayikho enye incwadi ayixabise ukodlula iBhayibhile. Siyifunda rhoqo ibe sifundisa ngayo abanye abantu iindaba ezilungileyo zoBukumkani bukaThixo. (Mat. 24:14) Yiloo nto kuye kwaqinisekiswa ukuba iNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele yesiNgesi ehlaziyiweyo ka-2013 yenziwa ngohlobo lokuba yomelele yaye ibe nomtsalane.
Xa abazalwana besebe lethu lokuprinta eliseWallkill, eNew York, eMerika, bathethathethana nesikhulu senkampani yokudibanisa iincwadi ngokwenziwa kweBhayibhile, sathi: “Le Bhayibhile niyifunayo asikwazi ukuyenza.” Saqhubeka sathi: “Ngelishwa, iiBhayibhile zenziwa njee ukuba zibukeke kodwa azomelelanga.”
Ezinye iiNguqulelo Zehlabathi Elitsha eziye zenziwa ziye zakhawuleza ukuguga. Ngenxa yoko, abazalwana eWallkill baye bahlolisisa amaqweqwe eBhayibhile, intlama yokuncamathisela neendlela zokudibanisa ukuze kuveliswe iBhayibhile eza kumelana neemozulu ezingafaniyo. Ngokusuka kolo lwazi balufumeneyo, baye bavelisa iBhayibhile ezithile ukuze zisetyenziswe ngamaNgqina entsimini kumazwe ahlukahlukeneyo ukuze kubonwe enoba azizukuguga ngokukhawuleza na.
Emva kweenyanga ezintandathu, zabuyiswa ukuze zihlolwe, yaye zaphuculwa zaza zathunyelwa kwakhona entsimini. Zizonke iiBhayibhile ezavavanywayo ziyi-1 690. Ezimbalwa kuzo zachanabeka. Ngokomzekelo, enye iBhayibhile yanyathelwa yimoto, enye yashiywa emvuleni ngempazamo ubusuku bonke yaza enye yatshona emanzini.
Ngo-2011, ngoxa kwakusavavanywa ezi Bhayibhile, eWallkill nase-Ebina, eseJapan kwathengwa oomatshini abadibanisa iincwadi ngesantya esiphezulu. Kwakungafuneki kuveliswe iiBhayibhile ezaneleyo ukuze zikhululwe nje kuphela, kodwa kwakufuneka kuveliswe iiBhayibhile eWallkill eziza kufana twatse neziveliswa e-Ebina.
Ekuqaleni, amaqweqwe ayegoba
Ekuqaleni kuka-2012, yomibini le mizi-mveliso yaqalisa ukuvelisa uhlelo luka-1984 lweNguqulelo Yehlabathi Elitsha, isebenzisa amaqweqwe amatsha. Ngenxa yoko, oomatshini abatsha bokudibanisa iincwadi basebenzisa izinto zokuncamathelisa ezingakhange zisetyenziswe kumaqweqwe aye avavanywa entsimini. Umphumo, ngowokuba amaqweqwe agoba kwaza ukuveliswa kwezo Bhayibhile kwamiswa.
Abenzi bezinto ezisetyenziswa kumaqweqwe bavuma ukuba le nto yokugoba kwamaqweqwe yingxaki eqhelekileyo xa kudityaniswa iincwadi, ngoko ke, babevakalelwa kukuba ayinakuconjululwa. Kunokusuka nje batshintshele kumaqweqwe aqinileyo, abazalwana bazimisela ukuvelisa iBhayibhile enoqweqwe oluthambileyo nolunomtsalane, kodwa elomeleleyo. Emva kokuzama iindlela ezahlukahlukeneyo zokudibanisa intlama yokuncamathisela nezinye izinto, bayifumana indlela eyabangela ukuba baphinde bavelise iiBhayibhile ezinoqweqwe oluthambileyo kodwa elomeleleyo nelingagobiyo.
Oomatshini bokudibanisa iincwadi eWallkill
Kwalungiselelwa ukuba kukhululwe iNguqulelo Yehlabathi Elitsha ehlaziyiweyo ngo-Oktobha 5, 2013, kwintlanganiso yonyaka yeWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Imizi-mveliso yathunyelelwa nge-elektroniki le nguqulelo ngoLwesihlanu, ka-Agasti 9, 2013, kwaza ukuveliswa kwayo kwaqala kusuku olulandelayo. IBhayibhile epheleleyo yokuqala yaveliswa ngoAgasti 15. Kwiiveki ezisixhenxe ezalandelayo, yomibini imizi-mveliso, oseWallkill nase-Ebina yasebenza ubusuku nemini ukuze ivelise iiBhayibhile eziyi-1 600 000, ukuze ngamnye oza kube ekulo ntlanganiso yonyaka afumane eyakhe.
Nangona le Bhayibhile intle yaye yomelele, amazwi ayo anik’ ubomi anomtsalane nangakumbi. Omnye udade waseMerika wabhala la mazwi emva kokuba efumene eyakhe: “Ekubeni ngoku ndinale Bhayibhile intsha, ndiliqonda bhetele iLizwi likaThixo.”
NgoAgasti 31, 2014, kuye kwaguqulelwa iNguqulelo Yehlabathi Elitsha epheleleyo okanye inxalenye yayo ngeelwimi eziyi-124. Okulandelayo luludwe lweeBhayibhile eziye zakhululwa kunyaka wenkonzo ka-2014.
Januwari 17, 2014
Julayi 5, 2014
Agasti 8, 2014
Agasti 22, 2014
Agasti 29, 2014
Ukusebenzisa iinguqulelo ezahlukahlukeneyo kungayiphucula indlela oyifunda ngayo iBhayibhile. Kukho iingongoma ezintathu ezenza iNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele kube luncedo ukuyisebenzisa xa ufunda.